South African Zulu URussia wasebenzisa udonga oludongeni lomshini wokugqoka umshini
Umbhalo wensimbi odwetshiwe odongeni unemibala emihle nombala ogqamile. Isetshenziswa kabanzi ensimini, efektri, ehhotela, ehotela, ehholo lokubukisa, eholidini, ezinqabeni zasendulo nasezindaweni zanamuhla.
Umshini wokwakha umshini wokugcizelela odongeni wensimbi odayiswayo odayiswayo ikakhulukazi uthengiswa eRussia, kgyzstan, u-Uberkistan namazwe aqhoshayo. Bathanda ishidi le-C8 T8 elenziwe ngombala ukuze kukhishwe indlu.
Idonga elivamile lendonga yensimbi enemibala ngaphambi kokugoqa i-coil ingu-1250mm, izinto ezisetshenziselwa ukugcizelela izinto zensimbi ze-PPGI zangaphambili.
Umshini ophelele wodonga wendimbi yokwakha umshini wokufaka umshini wokufaka umshini uhlanganisa i-decoiler, umshini wokwenza umqulu, uhlelo lokulawula ikhompiyutha kanye nokusebenzisa ithebula.